ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြစ်ကြီးနားက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ)
အစိုးရနဲ့ KIO တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 10:31 AM
ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ပါစေ. တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်သောသူများကျန်မာချမ်းသားကြပါစေ.
ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သောကတိ ကို ပြည်သူတွေရပါစေ.
ပြည်သူအတွက်ငြိမ်းချမ်းသောအခြေနေကိုဖန်တီးပေးနိုင်သောအစည်းအဝေးဖြစ်ပါစေ. လို့ အမြဲမေတာပို့ ဆုတောင်းပေးနေမှာပါ...